Ekpere Ndị Chineke Na-anaghị Aza na Ihe Mere Ọ Naghị Aza Ha | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
E nwere ekpere ndị Chineke na-anaghị aza. Legodị ụzọ ihe abụọ na-eme ka Chineke ghara ịza mmadụ ekpere.
1. Ekpere na-adabaghị n’uche Chineke
Chineke anaghị aza ekpere megidere uche ya ma ọ bụ nke na-adabaghị n’ihe ọ gwara anyị na Baịbụl ka anyị na-eme. (1 Jọn 5:14) Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru ka anyị zere anyaukwu. Ma, ịgba chaa chaa na-eme ka mmadụ dịrị anyaukwu. (1 Ndị Kọrịnt 6:9, 10) Ebe ọ dị otú ahụ, Chineke agaghị aza gị ma i kpegara ya ekpere ka o mee ka i rite ego na lọtrị. Chineke abụghị ohu anyị nke anyị ga na-agwa ka o meere anyị ihe ọ bụla anyị chọrọ. Obi kwesịrị ịdị gị ụtọ na Chineke adịghị otú ahụ. Ma ọ́ bụghị ya, ụjọ ga na-atụ gị na Chineke nwere ike imemila gị ma ndị iro gị gwa ya mee otú ahụ.—Jems 4:3.
2. Onye na-ekpe ekpere ma na-enupụrụ Chineke isi
Chineke anaghị aza ekpere ndị gbara isi akwara na-enupụrụ ya isi. Dị ka ihe atụ, o nwere ihe Chineke gwara ndị na-ekwu n’ọnụ na ha na-efe ya ma n’otu mgbe ahụ na-enupụrụ ya isi. Ọ sịrị ha: “ Ọ bụ ezie na unu na-ekpe ọtụtụ ekpere, adịghị m ege ntị; aka unu jupụtara n’ọbara. ” (Aịzaya 1:15) A sị na ha gbanwere àgwà ọjọọ ha ma mee ka ha na Chineke “ kpezie, ” ọ gaara ege ntị n’ekpere ha.—Aịzaya 1:18.
Jehova hụrụ anyị n’anya. Ọ chọkwara ka anyị na-ekpegara ya ekpere. Ma, ọ̀ bụ ihe niile anyị rịọrọ ya ka ọ ga-emere anyị?